Insulation kuboora connector is used with low voltage ABC cables with insulated aluminum conductors up to 6 KV.
Zvinotevera IPC ane vakwanise kuwanda mudziyo pane dzimwe Jera kuti IPC.
connector Izvi rakasimba zvikuru uye nyore kuti kuisa mu zvemuchadenga mwanda mitsetse, mheni mumugwagwa uye dzimba. Haatarisiri silicone mafuta, dzakagadzirwa.
Akakodzera chikuru kana bazi conductors pamwe aruminiyamu kana mhangura waya, izvo kushandiswa papfuura yokugadza, panguva yakaderera voltage rinotengeswa nevaridzi connective.
Installation iri pasi voltage connector zviri nyore kwazvo pasi divi achikanganisa, riri yakakodzera Kuda kutamba ne chipanera.
Low voltage insulated kuboora connectors apfuura miedzo maererano EN 50483, kushanda ruzivo pamwe tembiricha kubvira - 60 ° C kusvika +60 ° C bvunzo, tembiricha kuchovha bvunzo, kuchembera bvunzo, ngura kuramba bvunzo etc.
IPC wakaumbwa UV nemishonga thermoplastic, ane netini wakafukidzwa mazino, uye Stainless simbi Hardware
makasitoma edu akanga aratidza hwaivapo izvi? lv ABC zvakakodzera.
Mamwe connectors kuboora uye yakaderera voltage waya Fittingsanowanikwa kana yoga kana pamwe gungano.
Tine yose Kit kuti waya nenhumbi pakushaiwa ichi.
Welcome kutaura tive mamwe mashoko
Previous: Anchor sikuruwa pigtail mhando PS-7
Next: Ziso wakakodzera insulator gododd-16
Insulated Nokuboora Connector ZOP-52
Low voltage insulated kuboora connectors
yakaderera voltage rinotengeswa nevaridzi connective